Ukuphupha ngemfama Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukukhanya luphawu olubalulekileyo ekuchazeni amaphupha. Ngokusisiseko, nalu uphawu oluqinisekileyo, lubonisa ithemba kunye nempumelelo. Nangona kunjalo, oku akusebenzi ngokukodwa, kuba nangona ukukhanya kubonwa njengento emnandi kumaphupha amaninzi, inokwenzeka kwakhona ukuba ibonakale kwimeko entle: xa yomelele kakhulu okanye ikhanya kakhulu kwaye simfanyekisiwe. Kwimeko yamaphupha, sinokujonga kwindlu yokukhanya kwaye singaboni nto ngaphandle komhlophe.
Ukukhanya kwelanga okuqaqambileyo ngamanye amaxesha kunokusimfamekisa emaphupheni. Kwiimeko ezinqabileyo, kuyenzeka kananjalo ukuba la luna ngequbuliso kukhanya ngokuqaqambileyo kangangokuba asinakubona enye into. Kodwa athetha ntoni loo maphupha? Ulutolika njani uphawu "lweemfama"?
1 Umqondiso wephupha "elingaboniyo" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «limfanyekisiwe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha "elimfamekileyo" - ukutolikwa kokomoya
Umqondiso wephupha "elingaboniyo" - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolika uphawu "lokuphuphuthekiswa" kwephupha, umntu kufuneka aqale athathele ingqalelo into ethathwe kuye kwimeko yephupha. Nantsi ke indlela ilanga elinokutsha ngayo, ngokoluvo ngokubanzi ezimbi Izaziso kwaye babhengeze izinto ezingathandekiyo. Nangona wayelindele lukhulu, ithemba lakhe alizalisekanga. Iphupha lilumkisa abo bachaphazelekayo ukuba bangazithembi ngokugqithisileyo kwimpumelelo yexesha elizayo kwaye endaweni yoko baphuhlise isicwangciso esingxamisekileyo kwangaphambili.
Ukuba, ngokuchaseneyo, yindlu yesibane esimfamekisayo umntu onomdla ephupheni, uphawu lubonisa ukuba abanye bazi ngakumbi ngaye kunokuba ebefuna. Kusenokwenzeka ukuba uzama ukufihla izinto ezithile. Iphupha elo kufuneka likwazise ukuba Imfihlo lilize. Kungangcono ukubeka amakhadi phezulu etafileni.
Uphawu "lokumfamekisa" lwephupha lutolikwa kuphela ukuba kuyinyanga emfamekisa umntu ochaphazelekayo. Kule meko rhoxisa impumelelo, impilo y ukwaneliseka phakathi. Ixesha elide lelishwa liyadlula.
Kananjalo, kunqabile ukuba kwenzeke ephupheni ukuba umntu angaboni amehlo ngumthombo wokukhanya, kodwa bubuhle bomnye umntu. Oku kukhokelela kwisiphelo kutoliko jikelele lwamaphupha umntu ochaphazelekayo ngokulula phatha amashiti. Inomdla kakhulu kwiimpembelelo zabanye.
Uphawu lwephupha «limfanyekisiwe» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, uphawu "lokuphuphuthekiswa" lubonisa ukuba umntu ekuthethwa ngaye uninzi kakhulu kubomi bemihla ngemihla. ilawulwa ziimvakalelo yi. Uneemvakalelo ezinamandla kakhulu kwaye awunakuhlala ucinga ngendlela efanelekileyo ngazo. Oku kukhokelela kukusilela kobume ebomini bakho. I-subconscious yenza ukuba umphuphi azi ukuba kufuneka afunde ukwenza ngokuzimisela nangakumbi ngendlela elawulayo.
Umqondiso wephupha "elimfamekileyo" - ukutolikwa kokomoya
Ephupheni ngokomoya, uphawu "olumfamekileyo" luphawu lwe Qikelelaukuba umntu ochaphazelekayo akanakho ukubamba ngolwazi olusengqiqweni.
Iphupha Ngamasela Endlu
Phupha ngesonka samasi